Bahlulele ngokushesha kuye ngemininingwane yobuhle sengathi ukubukeka kwakhe okumnandi kwangaphandle, ubuhle noma ukukhanga kwezimpawu zakhe, ikhala lakhe elithi "Ekhonjisiwe", kwakuyinkomba yomphefumlo wakhe! Ngakho ... Funda kabanzi
Wafa ekudingisweni, eMorocco, ngoSepthemba 07, 1997, iMobutu isalokhu iyindaba eyinkimbinkimbi okumele ikhuthaze ukucolisiswa kwezepolitiki kanye nokusebenza ngokuzikhandla kwabaholi baseCongo ... Funda kabanzi
UPierre Nkurunziza, obambe izintambo kusukela ngonyaka ka-2005, ushonile ngoMsombuluko kulandela "ukuboshwa kwenhliziyo", umemezele abaphathi, abamemezele isililo sezwe izinsuku eziyisikhombisa. L ... Funda kabanzi
Ubuhle baseSudan bumsulwa obabazekayo. Ubuhle baseSudan buhle ngaphandle kokugqunywa. Ubuhle baseSudan buMnyama / ubuhle base-Afrika kubo bonke ubukhazikhazi bawo ... Funda kabanzi
Ngaphezu komsebenzi wobumbano, ubumbano nokubambisana phakathi kwamazwe ase-Afrika asanda kuzimela (ama-60s ingxenye enkulu), i-OAU yayizibekile ... Funda kabanzi
Izikhukhula zaminyaka yonke zalo mfula zagcwalisa isigodi saseNayile, okwenza sikwazi ukuchuma kwezolimo emazweni angaphezu kwe-10 ase-Afrika. Lo mfula ocwebile nangobungcwele ... Funda kabanzi